နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူမည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိဟု ဒုရှေ့နေချုပ်ပြော | ဧရာဝတီ
နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူမည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိဟု ဒုရှေ့နေချုပ်ပြော
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 6, 2013 | Hits:3,089
6 | | ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ယခင်အစိုးရခေတ်က အာဏာအလွဲသုံးစားခဲ့သူများကို နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူမည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိဘဲ ပြဋ္ဌာန်းရန် ကြိုးစားပါက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောဆိုလိုက်သည်။
လွှတ်တော်တွင်း မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Getty Images)
နေပြည်တော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က “နိုင်ငံသားများ၏ တရားဝင်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိခိုက် နစ်နာနေသော ပြည်သူများ အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိနိုင်ရန် တည်ဆဲဥပဒေများ ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး အပ်နှင်းထားသော အာဏာကို အလွဲသုံးစား ပြုခဲ့သူများအား အရေးယူနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိပြီး ပြည်သူလူထုအား အကာအကွယ် ပေးမည့် အထူးဥပဒေ တရပ် ပြဋ္ဌာန်းပေးပါရန် တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆို တင်သွင်းမှုအပေါ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက အထက်ပါ အတိုင်း တုံ့ပြန် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃ အရ မည်သည့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ နောက်ကြောင်းပြန် သက်ရောက်စေရန် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် မရှိစေရဟု ဖော်ပြထားပြီး ပြဋ္ဌာန်းရန် ကြိုးစားမှုများသည် ယင်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းဦးက ရှင်းပြသည်။
“အပ်နှင်းထားတဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို အရေးယူနိုင်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ ကိစ္စကတော့ အဲဒီကာလက အာဏာကို အမှန်တကယ် အလွဲသုံးစား ပြုခဲ့ရင်တောင်မှ အဲဒီအချိန်က ရှိရင်းစွဲ ဥပဒေအရသာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကာလမှာ အရေးယူနိုင်ဖို့ ဥပဒေ တရပ်ပြဋ္ဌာန်းမယ် ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃ မှာပါတဲ့ မည်သည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေမျှ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်စေရန် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးထွန်းထွန်းဦးက ဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းကမူ အာဏာအလွဲသုံးစား ခဲ့သူများကို နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရန်ကိစ္စ မပြောဆိုသင့်တော့ဘဲ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးကမူ ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုသည် ရှင်းလင်းမှု မရှိဘဲ ယခင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုများ အလိုက် ပြန်လည်အရေးယူနိုင်မည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ရှု့ပ်ထွေးမှုများ ရှိစေသည်ဟု ပြောသည်။
“တကယ်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံလို့ လွှတ်တော်ကို ၀င်ကတည်းက အရင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လိုမှ အရေးယူလို့ မရဘူးဆိုတာ အားလုံး နားလည်ထားတာပဲ။ တရားဝင်လည်း ပြဋ္ဌာန်းချက် ရှိထားပြီးသားပဲ။ အခုကတော့ ရှေ့နေချုပ်ကိုယ်တိုင်က ဒါကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ထပြောလာတာဆိုတော့ ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာရှိလာတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အာဏာ အလွဲသုံးစားခဲ့သူများကို နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူနိုင်သော ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိသကဲ့သို့ အာဏာ ရှိခဲ့သူများ၏ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ်လည်း တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရဟု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း ၁၄ ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၄၄၅ တွင် အစိုးရသစ်သည် ယခင်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်မှု၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ပြန်တမ်း၊ ကြေညာချက်၊ ဆောင်ရွက်ချက်၊ တာဝန်များ၊ ရပိုင်ခွင့်များကို ဆက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ် အကြောင်းပြုပြီး တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ဦးသိန်းညွှန့် တင်သွင်းသော အဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဏာအလွဲသုံးစား ခဲ့သူများ အရေးယူရန် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးရန် တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမည်ဟု ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီး ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းနှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့က ပြောဆိုသည်။
တပ်မတော်နှင့် ပါတီပေါင်းစုံပါ အခြေခံဥပဒေ သုံးသပ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တကယ် ပြင်နိုင်မလား
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လျှို့ဝှက် ဆောင်ရွက်မည်
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး NLD စတင်ကြိုးပမ်း
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး NLD စွန့်လွှတ်ပြီလား
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website moejoo February 7, 2013 - 1:10 pm	သန်းရွှေတို့တော့ပျော်နေမှာပဲ.ဒီပိုစ်ကိုမြင်ပြီး။
Reply	Oak Soe February 8, 2013 - 11:46 pm	Crazy 2008 policy. If we can’t do with that law we will do with international law. Why not such kind of crazy law can’t be changed in this new age, the people are still influenced by that 2008 law, or the new leaders has still been holding the old motive and so doubtful leaders. So, need to kill all generations of Junta.
Reply	မြန်မာပြည်သား February 9, 2013 - 2:02 pm	ယခင်အစိုးရ လက်ထက် က သူတို့ ကိုယ် သူတို့ ပြဌာန်းပြီးသော ဥပဒေ များကို သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ပြန်လည် ချိုးဖောက် ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သော် မည်သို့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မည်နည်း။
ဥပမာ ယခင်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် လူသတ်ခဲ့ပြီး နောင်အစိုးရ လက်ထက်မှ ပေါ်လာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အခွန်ဆောင်မှု ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်နည်း…
Reply	Ko khine February 11, 2013 - 8:23 am	ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြောတာ သဘာဝကြပါတယ်လို့ ထန်တယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ယခင်အစီုးရမှ အာဏာအလွဲသုံး
စားလုပ်တာ တွေ ပြန်ဖေါ်မည်ဆိုရင် အမျိုးမျိုးပြသနာသက်သွားနိုင်တယ် ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်တော့ တဲ့အ ရာဖြစ်တယ် ။ စဉ်စားစရာကိုမလိုတော့သည့်အပိုင်းပါ ဦးသိန်းညွန်ခင်ဗျား ။
ဒီလိုနဲ့ တယောက်ပြီးတယောက် အနာတွေ ဆွနေရင် ဘယ်လိုနည်းနှင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာလဲ ။ အဟောင်းတွေ အားမေ့ထားပြီး အနာဂတ်အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြရအောင် ဦးသိန်းညွန် ခင်ဗျား ။ အနာဟောင်းတွေတူးဆွမနေတော့ပဲ ၊ လက်ရှိ ဦးပိုင် လီမီတက်မှ ပြန်ပေးရန်ရှိသည့် လယ်ယာမြေတွေ ၊ မြေလွတ်မြေ ရိုင်း တွေ ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ အား မူလပိုင်ရှင်တွေဆီ အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါ ။ အဲဒါတွေပြီးမှ လက်ရှိ ဦးပိုင် လီမီတက်ကြီးအား သက်ဆိုင်ရာ ၀န်းကြီးဌာန အသီးသီးဆီ ပြန်လည် လွဲပြောင်းပေးဖို့ထပ်လုပ်ပေး ကြဖို့ လုပ်ပေးကြပါ ၊ ဒီလောက်ဆိုရင် ပြည်သူ့ အမတ်တယောက် အနေနဲ့သေပျော်လောက်ပါပြီ ။
Reply	Mr.wai phy November 21, 2013 - 2:22 am	ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြီးနိုင်ငံသားတွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံပြီးအာမခံချက်ရှိတဲ့ဥပဒေပြဌာန်းပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးလို့ယူဆမိပါတယ်
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ၁၂ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရန် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော် အတည်ပြု
အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ရေး ၁၂ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရန် ရန်ကုန်လွှတ်တော်တွင် အရေးကြီး အဆိုတင်
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက NLD ကို ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်ရေး အားစမ်း
ရပ်ကျေး ရွေးကောက်ပွဲ အစီရင်ခံစာ ၈၈ မျိုးဆက် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး အစီရင်ခံစာ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း
အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲရေး NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားများ အမြင်မတူ
သဘောထား ကွဲပြားနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အခြေခံဥပဒေပုံစံ (၂)
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲဖို့ မလိုကြောင်း ဦးဌေးဦး ပြော